UJean Chretien: I-Street Fighter eneziNzululwazi zezobupolitika
I-Chief Party Party iLed 3 Iingqungquthela zoLawulo
UJean Chretien wayelungu lePalamente iminyaka engama-40 waza wahamba noonobumba abathathu be-Liberal njengolunkulumbuso kusukela ngo-1993 ukuya ku-2003. Oorhulumente baseChretien banikela iCanada imigaqo-nkqubo yezenhlalakahle kunye noqoqosho olusempilweni lwaseCanada, kuquka ukupheliswa le ntsilelo. Kwiminyaka yokuvala, urhulumente waseChretien ukhankanywe ngamacandal ngokuphathwa kakubi kunye nokuhlukana kwiQumrhu leLiberal njengoko uPolen Martin wanyusa ukuba athathe umsebenzi wongqongqoshe .
UKretien wazalwa ngoJan 11, 1934, eShawinigan, eQuebec. Ufumene i-degree ye-bachelor degree ukusuka kwiSt. Joesph Seminary eTrois-Rivieres, eQuebec, kunye ne-degree yaseLaval University. Wabonisa umdla kwizopolitiko ukususela xa wayeseneminyaka engama-10 ubudala kwaye wayengumdlali okhuselayo onobangela obunobuninzi ngexesha leekholeji.
Emva kokusebenzela abanye abaviwa, wazuza umkhankaso wokuqala wokuba ilungu lePalamente esuka eSt-Maurice-Lafleche, eQuebec, ngo-1963. UPitrus Trudeau waba ngunkulumbuso ngo-1968, kwaye uCretien waba ngumdlali ophambili kuRhulumente kaTrudeau; Wayekhonza njengomphathiswa weengeniso zelizwe, umphathiswa we-Indiya kunye nemicimbi yasentla, umphathiswa wezemali aze abe ngumphathiswa wobulungisa kunye nommeli jikelele weChanada. Emva kokuba uTrudeau etshiyelwe, uChretien washiya ezopolitiko ngo-1986 waza wenza umthetho. Kodwa akazange ahlale kude ixesha elide. Ngo-1990, uChretien waqhubela inkokeli yeQumrhu leLiberal waza waphumelela waza wabuyela njengelungu lePalamente elimele uBeausejour, eNew Brunswick; Ngowe-1993 iiLiberal zanqoba ininzi yezihlalo ePalamente kwaye zenza uCretien unkulumbuso-sikhulu, isihlalo esabambelela kude kube ngowama-2003, xa esethathe umhlalaphantsi.
Emva kokuhla, wabuyela kwisenzo somthetho kwaye uyaqhubeka ebanjwe ngokugqithiseleyo njengombutho waseLiberal.
Amaphuzu avelele njengoNkulumbuso
Ukuphucula umnotho waseCanada, kubandakanywa nokupheliswa kwetyala kunye nentlawulo yebhajethi kwiminyaka emihlanu eqondekileyo
Ugqityiwe iBillity Bill, ethi iQuebec iyakwazi ukuhlukana kuphela neCanada emva kwevoti ezininzi ngokuqinisekileyo "yee" kumbuzo ocacileyo
I-ajenda yezenhlalakahle esebenzayo ifake i-tax tax benefit
Ukulungiswa kweProtocol yaseKyoto
Usebenze ukuvalwa kwehlabathi kumigodi yomhlaba
Icetyiswa ukuba kusekwe inkundla yenkundla yezobugebengu
Ukuxhaswa yimfazwe yobugandlo kodwa ayiyi kuthumela imikhosi e-Iraq ngaphandle kwesisombululo se-UN sokwenza umkhosi
Ngo-2008, incwadi kaChretien yeememori zakhe, "Iminyaka Yami njengoNkulumbuso," yapapashwa. Ujoyina "Ukulungiswa Kwintliziyo," eyapapashwa ngaphezu kweminyaka engama-20 ngaphambili, ngowe-1985. Unemiba yeengqondo kwaye yayineentliziyo ezine-intliziyo ezithandwayo ngo-2007, apho yafumana khona ngokupheleleyo. Nangona sele sele ephuma ku rhu lumente, akazange ahlale ethule. Ngo-Matshi 2013, wayezigxeka ngokugxeka izikhundla zikaNdunankulu uStephen Harper kumgaqo-nkqubo welizwe langaphandle, kwaye kwincwadi eyavulelekileyo kumaKhanadi malunga neYurophu eyinkinga yokufudukela kwelinye ilizwe yathi uHarper "wahlazisa iCanada" kwaye "ndibuhlungu ukubona ukuba ngaphantsi kweminyaka eyi-10, urhulumente waseHarper uye wachitha iminyaka engama-60 eCanada eyaziwa ngokuba ngumakhi woxolo kunye nenkqubela phambili. " UChretien wakhuthaza amaKhanadi ukuba amgatye urhulumente kaHarper, kwaye ngowama-2015 okwenzeka ngoluhlu lwamaLeberal Party, okwenza u- Justin Trudeau ngumbongameli.
Kuphi ukuguqulwa kweNkosi yethu?
ESL Isifundo - Izicwangciso zokuhamba
Izixhobo zokudweba isicwangciso esilula
Funda ukuthetha ngeMozulu ngesiJamani
Indlela yokuhlamba i-200 Fly
IsiCwangciso seSifundo: Mkhulu kunye noNcinci